Nhau dzeBhaibheri: Murume Anesimba Gurusa - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Unoziva zita romurume ane simba gurusa akamborarama here? Mutongi anonzi Samsoni. NdiJehovha anopa Samsoni simba rake. Samsoni asati atoberekwa, Jehovha anoudza mai vake kuti: 'Nokukurumidza uchava nomwanakomana. Achatungamirira mukuponesa Israeri pavaFiristia.'
VaFiristia vanhu vakaipa vanogara muKanani. Vana varume vazhinji vokurwa, uye vanokuvadza chaizvo vaIsraeri. Rimwe zuva, Samsoni ari kuenda kunogara vaFiristia, shumba huru inouya ichidzvova kuzosangana naye. Asi Samsoni anouraya shumba namaoko ake bedzi. Anourayawo mazana avaFiristia vakaipa.
Gare gare Samsoni anodanana nomukadzi anonzi Dherira. Vatungamiriri vavaFiristia vanopikira kuti mumwe nomumwe wavo achapa Dherira zvimedu zvesirivha 1 100 kana akavazivisa chinosimbisa Samsoni zvikuru. Dherira anoda mariyo yose. Haazi shamwari yapamwoyo yaSamsoni, kana yavanhu vaMwari. Nokudaro anoramba achibvunza Samsoni chiri chinomusimbisa zvikuru.
Pakupedzisira, Dherira anoita kuti Samsoni amuudze chakavanzika chesimba rake. 'Bvudzi rangu harina kumbogerwa,' anodaro.'Kubvira pandakaberekwa, Mwari akandisarudza kuva mubatiri chaiye wake anonzi Munaziri. Kana bvudzi rangu rikagerwa, ndingarashikirwa nesimba rangu.'
Eya, Dherira paanonzwa izvi, anoita kuti Samsoni avate pamadya ake. Ipapo anodana mumwe murume kuti apinde ndokugera bvudzi rake. Panomuka Samsoni, arashikirwa nesimba rake. Zvino vaFiristia vanopinda ndokumutapa. Vanotushura meso ake ose, ndokumuita muranda wavo.
Rimwe zuva vaFiristia vanova nomutambo mukuru wokunamata mwari wavo Dhagoni, uye vanobudisa Samsoni mutorongo kuzoita musere naye. Kurizvino, bvudzi raSamsoni rakurazve. Samsoni anoti kukakomana kanomutungamirira noruoko: 'Nditendere kuti ndibate mbiru dzakatsigira chivako.' Ipapo Samsoni anonyengetera kuna Jehovha nokuda kwesimba, ndokubatisisa mbiru. Anodanidzira kuti: 'Ngandife hangu pamwe chete navaFiristia.' VaFiristia 3 000 vari pamutambopo, uye apo Samsoni anozvikotamisira pambirudzo chivako chinokoromokera pasi chichiuraya ava vanhu vose vakaipa.
VaTongi ganhuro 13 kusvikira ku16.
Murume akamborarama aiva nesimba gurusa anonzi ani, uye ndiani aimupa simba?
Pane imwe nguva, Samsoni anoitei kushumba hombe, sezvaunogona kuona pamufananidzo?
Mumufananidzo uyu Samsoni ari kuudzei Dherira chaanga asingafaniri kuudza vanhu, uye izvi zvakakonzera sei kubatwa kwake nevaFiristia?
Samsoni anouraya sei vavengi vake vechiFiristia 3 000 zuva raakafa?
Verenga Vatongi 13:1-14.
Manoa nomudzimai wake vanoratidza vabereki muenzaniso wakanaka sei wokurera vana vavo? (Vat. 13:8; Pis. 127:3; VaEf. 6:4)
Verenga Vatongi 14:5-9 uye 15:9-16.
Nyaya yaSamsoni yokuuraya shumba, kudambura tambo itsva dzakanga dzakamusunga, uye kushandisa kwaakaita shaya yembongoro kuuraya varume 1 000 inoratidzei nezvokushanda kwomudzimu mutsvene waJehovha?
Mudzimu mutsvene unotibatsira sei nhasi? (Vat. 14:6; 15:14; Zek. 4:6; Mab. 4:31)
Verenga Vatongi 16:18-31.
Samsoni akakanganiswa sei neshamwari dzakaipa, uye tingadzidzei mune izvi? (Vat. 16:18, 19; 1 VaK. 15:33)
Samsoni Kadhi reBhaibheri
Tarisa uone kuti chii chakaita kuti Samsoni ave nesimba.